Sejak Bila Di Atas Dunia Ini Ada Undang-undang Halang Orang Berdoa?
အစ္စလာမ် ရနံမကင်းတဲ့ ဘားရက်ဟူစိန်အိုဘားမား
AES Guna Kenderaan Berlogo JPJ - KASE Buat Laporan Polis
PKNS Nafi Tuduhan Liar & Fitnah Noh Omar
White papers on Talam and water industry in Selangor
မွတ်စလင်တို့အား ရိက္ခာရောင်းခဲ့၍ ရခိုင် အချင်းချင်း သတ်ခဲ့မှုဖြင့် ရခိုင်လူမျိုး ၁၂ ဦးအား ဖမ်းဆီးထား
အစ္စလာမ်ဘာသာကိုဆဲခဲ့စော်ကားခဲ့တဲ့လူတွေ ခွင့်ပြုထားတဲ့ အစိုးရ မသိချင် မမြင်ချင်ဟန်ဆောင်နေတဲ့ အတုိုက်အခံဆိုသူတွေ မြောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်ပေးတဲ့ လူသတ်မီဒီယာတွေ ကမ္ဘာတည်သ၍ မကျေနပ်ဘူး
SPR Akui Terdapat Pelbagai Kesilapan Dalam Daftar Pemilih
Like It Or Not, It's The Bitter Truth..
Terasa Pedasnya Cili, Utusan Fitnah TG Nik Aziz Lagi
An Arab View....................
Sejak bila di dalam dunia khuususnya di Malaysia ini wujudnya undang-undang yang menghalang seseorang daripada berdoa?
Apabila laporan polis dibuat kerana ada orang berdoa (tak kira apa pun doanya) maka ia menunjukkan kebebalan UMNO sendiri dan agensi berita yang melaporkannya semata-mata untuk mensensasikan isu berkenaan.
Sebelum ini GB pernah menulis menyatakan bahawa DOA adalah hak individu/kumpulan. Orang berdoa kepada Tuhan untuk apa juga tujuan dan adalah hak Tuhan untuk memakbulkan doa seseorang sepertimana firmannya yang bermaksud:
"Dan tuhanmu berfirman: 'berdoalah kepadaku nescaya akan kuperkenankan bagimu.' Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri daripada menyembah-ku akan dimasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina." (Surah Ghafir: 60)
Tiada siapa yang boleh menghalang doa seseorang - apatah lagi jika doa itu doa yang dibaca secara sirr (di dalam hati)
Nak ditangkapkah keseluruhan 40,000 orang ahli PAS yang mengaminkan doa KO BN di Stadium Sultan Muhammad IV itu dan kita mengalu-alukan jika polis bersedia untuk menahan keseluruhan mereka yang berdoa itu.
Cuma yang GB nak tanya, dibawah fasal mana, seksyen berapa - undang-undang di dalam negara ini yang ada memperuntukkan menghalang seseorang daripada berdoa?
Belum pernah ada sebarang kes di dalam mahkamah seluruh dunia sejak dulu sampai sekarang yang melibatkan penghalangan seseorang daripada berdoa.
Kemudian tentang isu murtad. Perlu dinyatakan secara khusus dan teliti bilakah masanya Mursyidul Am PAS, TG Nik Aziz memurtadkan UMNO? TG Nik Aziz hanya menyatakan bahawa mereka yang memperlekehkan Islam boleh menjadi murtad, berdasarkan kitab Mestika Hadith terbitan Jabatan Perdana Menteri.
Yang UMNO terasa sangat perkataan itu ditujukan kepada mereka, kenapa? Sudah termakan ladakah sehingga terasa pedasnya?
Masalah utama kini ialah orang UMNO sendiri tidak memiliki dan tidak membaca kitab Mestika Hadith yang kata-kata aluannya ditandatangani sendiri oleh Perdana Menteri ketika buku itu diterbitkan iaitu Dr. Mahathir Mohammad!
Posted: 20 Nov 2012 04:57 AM PST
မွတ်စလင် ဆန့်ကျင့်ရေး လှုပ်ရှားမှု ပျံနှံနေချိန် ၊ အစ္စလာမ်သာသနာကို အကြောင်းမဲ့ အမြင်မှားနေ ချိန် ၊ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတ အိုဘားမား မြန်မာ့ မြေသို့ ခြေချခဲ့ သည်။ အစ္စလာမ် မုန်းတီးရေးတရား မှိုင်းတိုက်ချိန် တွင် တမြေတည်းနေ သူ မြန်မာပြည် သူများ အကြား အပြန် အလှန်လေးစားချစ်ခင်မှု ကို တည်ဆောက်ကြ စေရန် ရည်ရွယ်၍ အစ္စလာမ် သာသနာ နှင့် သမ္မတ အိုဘားမား အဆက်အစပ်ကို တင်ပြပေးလိုက်ပါ သည်။
အဖွားဖြစ်သူက အိုဘားမားကို မွတ်စလင် ဖြစ်စေချင်
သမ္မတ အိုဘားမား ၏ အဘွားဖြစ်သူ အသက် ၈၈ နှစ်ရှိ ကင်ညာနိုင်ငံသူ က ၂၀၁၀ ဟာဂ်ျဝတ်ပြု စဉ် မြေးဖြစ်သူ အိုဘားမားနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစ္စလာမ် ဘာသာ၏ အမြတ်ဆုံးဝတ်ကျောင်းတော် တွင် ဆုမွန်တောင်းဖူးခဲ့သည်။
"ကျွန်မ မြေးလေး ဘားရက် အစ္စလာမ် အေးရိပ်ခိုလာဖို့ ဆုမွန်ဒိုအာ တောင်းခဲ့ပါတယ် "ဟု ဆာရဟ် အိုမာ က ဆော်ဒီအခြေစိုက် အလ်ဝသန် သတင်းစာနှင့် အင်တာဗျူးစဉ် ပြောကြားလိုက်သည်။
အဆိုပါ ဟာဂ်ျ ခရီးစဉ်တွင် အိုဘားမား အဘွား ဆာရာအိုမာ၊ နှင့်အတူ ဦးလေး စအီဒ်ဟူစိန်အို ဘားမား လည်း ဟာဂ်ျဝတ်ပြုခဲ့သည်။
အိုဘားမား တစ်ဝမ်းကွဲ ညီအစ်ကိုဖြစ်သူ ဖိုင်ဆယ်အမ်ဘုယ သည်လည်း အဘွားဖြစ်သူ ၏ တိုက်တွန်း မှုကြောင့် အစ္စလာမ် အေးရိပ် ခိုခဲ့သည်။
"ကျွန်တော် အဖွားကတော့ မွတ်စလင်မ ဟုတ်သူ တွေကို အစ္စလာမ်ရိပ်ခိုလာအောင် ဖိတ်ခေါ် ဖို့ တော်တော် စိတ်ဝင်စားတာဗျ။ ကျွန်တော် အစ္စလာမ် သာသနာကို သူဆီက နေ လေ့လာခဲ့တာ " ဟု ၄င်းက ပြောပါသည်။
ငယ်ငယ်တုန်းက ဆွလာသ် ၀တ်ပြုဖူးခဲ့
အိုဘားမား မိသားစု အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခဲ့စဉ် အိုဘားမား တစ်ယောက် မွတ်စလင် အ သိုင်း အ၀ိုင်း အကြား ပျော်မွေ့ခဲ့ဖူးသည်။ အိုဘားမား သူ့အဖေက မွတ်စလင် ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် သူ မိခင် ကတော့ သူ အစ္စလာမ်ကိုလေ့လာနေတာ မကြိုက်ဘူး။ တစ်ခါတစ်ခါ ကျောင်းကိုလာရင် ဘာကြောင့် အိုဘား မား ဘာကြောင့် ကုရ်အာန်ကျမ်းစာသင်ပေးရလဲ လို့ သူ့အမေက ဆရာတွေ ကို ဒေါသတစ်ကြီး ပြောဖူး တယ်။ ဒါပေမယ့် သူက တော့ ဆက်ပြီး အစ္စလာမ်နဲ့ထိတွေ့ဆဲပဲ "ဟု အိုဘားမား ကို စာသင်ပေးခဲ့ဖူးသူ Grade3ကျောင်းဆရာ Effendi က ပြန်ပြောင်းပြောပြသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် သမ္မတအဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြောက်ပြီးနောက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် အီဂျစ်နိုင်ငံ သို့ ရောက်ရှိ ခဲ့ စဉ် အိုဘားမားသည် ကမ္ဘာမွတ်စလင်တို့အား အတ်စလမ် မုအာလိုင်းကွန်းမ် ဟု ဆိုကာ လူပရိတ် သတ်အားစတင် နှုတ်ခွန်းဆက်ခဲ့သည်။ သူ၏ မိန့်ခွန်းနောက်ဆုံးပိုင်း တွင်လည်း သမ္မာကျမ်း၊ The Talmud ကျမ်းအပါအ၀င် ကုရ်အာန် ကျမ်းစာပိုဒ် ကို ကိုးကားပြောကြားခဲ့သေးသည်။
အိုလူသားအပေါင်းတို့ ။ ငါအရှင်မြတ်သည် သင်တို့ကို အမျိုးသားတစ်ဦး အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ လူမျိုး၊ အသွယ်သွယ် အဖြစ် ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အကြောင်းမှာ တစ်ဦးကို တစ်ဦး အသိအမှတ်ပြုဖို့ရန်ဖြစ်သည်။ ဟူသော ကုရ်အာန်ကျမ်းစာ ပိုဒ်ကို ကိုးကား၍ လူသားများ အတူ တကွ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ကြရန် တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
အမှန်တကယ်တမ်း ဘာသာတရားအားလုံးသည် ကောင်းရာကိုညွှန်ကြားကြသည်ချည်းဖြစ်ရာ အစ္စလာမ် ရနံ့မကင်းသူအိုဘားမား မိန့်ခွန်း ၊ အိုဘားမား သတင်းကိုနား စွန့်ရင်း အစ္စလာမ် သာသ နာ အပေါ် အမှန်မြင်လာပြီး အမုန်းတရားများမှ အမြန်ဆုံး လွှတ်ငြိမ်းခွင့်ရရှိပါကာ အမိမြန်မာမြေ ငြိမ်းချမ်း သာယာစေရန် အတူ တကွ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့ မွတ်စလင် သတင်းစဉ် မှ ဆုမွန်တောင်း လိုက်ရပါ သည်။
Posted: 20 Nov 2012 04:27 AM PST
The mulberry tree we bought from Kampung Simee pasar tani in Ipoh two years ago has grown and is fruiting. Whatasight it was to see the little fruits bursting out in shades of pink and red as they began to ripen. I remember reading about silkworms being fed mulberry leaves in geography class and had always wondered howalive tree looked like. Now I know.
Ripening mulberry fruits in our garden.
Traditional Chinese Medicine uses mulberry leaves as one of the ingredients in herbal soups to improve eyesight. The dried leaves are also used to make tea and are believed to be beneficial againstanumber of ailments. As for me, I prefer to enjoy the fruits. They should be ripe for harvesting in the next few days when they turn black.
Posted: 20 Nov 2012 06:23 AM PST
Kase lapor polis pengendali AES menyamar penjawat awam
Memorandum tersebut diserahkan kepada Ahli Parlimen Bukit Bendera, Liew Chin Tong. Turut bersama dalam himpunan tersebut Tian Chua (PKR-Batu), Sim Tong Him (DAP-Kota Melaka) dan Jeff Ooi (DAP-Jelutong). -HD
Posted: 20 Nov 2012 02:05 AM PST
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ပြောကြားခဲ့တဲ့ အမေရိကန် သမ္မတအိုဘားမား၏ သမိုင်းဝင်မိန့်ခွန်း (အချို့နေရာများတွင် အသံများလုံးထွေးနေမှုကြောင့် ဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါ)
ကျနော်ဒီတက္ကသိုလ်ကို ရောက်လာခဲ့ရတဲ့အတွက် ဒီနိုင်ငံကို ပထမဆုံး တက်ခွင့်ရတဲ့ အမေရိကန်သမ္မတဦးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကျနော်ကို ဒီကိုလာတာက ဒီနိုင်ငံရဲ့အရေးပါမှုကြောင့်ပါပဲ။ လူကြီးမင်းတို့က အရှေ့နဲ့တောင်အာရှဆက်စပ်ပေးတဲ့လမ်းဆုံလမ်းခွမှာ ရောက်နေတဲ့အတွက် အရေးပါနေတာ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဦးရေ အများဆုံးနိုင်ငံတွေနဲ့ လူကြီးမင်းတို့က နယ်မြေချင်းဆက်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံသမိုင်းက လည်း နှစ်ပေါင်းထောင်ချီရှိ်နေပြီဖြစ်သလို ကမ္ဘာ့အလျှင်မြန်ဆုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ ဒေသရဲ့ကံကြမ္မာကိုပံ့ပိုးပေး နိုင်တဲ့စွမ်းအား တွေရှိနေပါတယ်။
ကျနော် ဒီကိုရောက်လာတာက လူကြီးမင်းတို့နိုင်ငံရဲ့လှပတင့်တယ်မှုနဲ့ ထူးခြား မတူကွဲပြားမှုတွေကြောင့်။ ကျနော်ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီးကို စောစောကပဲ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီကိုရောက်လာခြင်းတခုကတော့ ဒီတက္ကသိုလ်ကို လေးစားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျောင်းတော်ကြီးမှာ ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေးကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကျောင်းတော်ကြီးမှာပဲ ကိုအောင်ဆန်းက လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို မစတင်ခင်မှာ မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအဖြစ် လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီနေရာမှာပဲ ဦးသန့်က ကုလသမဂ္ဂကို မဦးဆောင်ခင်မှာ ဒီကျောင်းတော်ကြီးမှာပဲ ကမ္ဘာကြီးအကြောင်းကို ဆည်းပူးခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်တွေမှာ ပညာရှင်တွေရုန်းကန်ကြိုးစား ခဲ့ကြသလို ကျောင်းတော်သူ ကျောင်းတော်သားတွေကလည်း သူတို့ရဲ့အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးတွေ ကို တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ လွှတ်တော်က ဒီတက္ကသိုလ်ကို အားသစ်ပြန်လောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ကို အနည်းဆုံးချမှတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကို ဒီနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေရဲ့ ပညာရေးကသာ အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာဖြစ်လို့ ဒီကျောင်းတော်ကြီးက တချိန်က သူရဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှု ကို ပြန်လည်ဆောင်ကြဉ်းရမှာမလွဲတော့ပါဘူး။
နောက်ဒီကို ရောက်လာခြင်းက ကျနော်တို့နှစ်နိုင်ငံကြားက ဆက်စပ်မှုကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်တွေက အမေရိကန်ကုန်သည်တွေ၊ သာသနာပြုသူတွေက ကုန်သွယ်မှု၊ သာသနာပြုမှုတွေ အတွက် ရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနယ်နိမိတ်အတွင်းမှာပဲ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ကျနော်တို့ရဲ့ လေသူရဲတွေက တရုတ်ပြည်ကို ပျံသန်းခဲ့ကြသလို ကျနော်တို့ရဲ့ တပ်ဖွဲ့အများအပြားကလည်း ဒီမြေပေါ်မှာပဲ အသက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်နိုင်ငံနှစ်ခုစလုံးက ဗြိတိသျှအင်ပါယာ အတွင်းက ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကို ပထမဆုံးအသိအမှတ်ပြုတဲ့ နိုင်ငံတွေထဲမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ယာဉ်ကျေးမှုဗဟိုဌာနကို ရန်ကုန်မှာထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ဒီကျောင်းတော်ကြီးမျိုးတွေနဲ့ ပညာအပြန်အလှန်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းသာမိပါတယ်။ မတူကွဲပြားမှုတွေရှိနေတဲ့ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းမှာပဲ အမေရိကန်လူမျိုးတွေက ဒီနိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံသားတွေအပေါ် သံယောဇဉ်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
အားလုံးထဲက အရေးကြီးတချက် ဒီကိုရောက်လာခဲ့တာက လူ့ဂုဏ်သိက္ခာအပေါ်မှာ အမေရိကန်ရဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းမှာ ကျနော်တို့နိုင်ငံတွေက တစိမ်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့မှာတော့ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် အမြဲတမ်းပဲမျှော်လင့်ချက်ထားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုပြောနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေက ကျနော်တို့ကို မျှော်လင့်ချက်တွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ သတ္တိတွေကိုလည်း ကျနော်တို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဖြူရောင်ဝတ်ထားကြတဲ့ လှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေက တနင်္ဂနွေနေ့မှာ နိုင်ငံရေးမိသားစုတွေဆီ သွားတွေ့ခဲ့ကြတာတွေ။ ရွှေဝါရောင်သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ သံဃာတော်တွေက လမ်းတွေပေါ်မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာတွေကို ကျနော်တို့ မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ နာဂစ်မုန်တိုင်းကို တုံ့ပြန်ဖို့ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအကြောင်းလည်း သိခဲ့ရပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုအသံကို ဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့အသံတွေ၊ ဟစ်ဟော့ပ်အနုပညာရှင်တွေရဲ့ စည်းချက်တွေကိုလည်းကျနော်တို့ကြားခဲ့ရပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘိုးဘွားတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အဆက်အသွယ်မပြတ်ခဲ့ကြတဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေကိုလည်း သိခဲ့ရပါတယ်။
ရင်ထဲက မျှော်လင့်ချက်ရှင်သန်နေမျှ ဘယ်လူသားကိုမှ အမှန်တကယ် အကျဉ်းချထားလို့မရဘူးဆိုတာ သက်သေပြခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ ဂုဏ်သိက္ခာတွေကြောင့် ကျနော်တို့မှာ အတွေးသစ်တွေနိုးကြားခဲ့ရပါတယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေက ရုပ်လုံးပေါ်လာပါတယ်။ အခုဆိုရင် အရပ်သားဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရ၊ လွှတ်တော်တွေ ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေပြီ။ အရင်က ဥပေဒပြင်ပလို့ သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကလည်းရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူတွေ ရာပေါင်းများစွာကို လွှတ်ပေးခဲ့သလို အဓမ္မစေခိုင်းမှုတွေကိုလည်း တားမြစ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
တိုင်းရင်းသားတပ်မတော်များနဲ့ကနဦးအပစ်အခတ်ရပ်စဲနိုင်ခဲ့သလို ပိုမိုပွင့်လင်းတဲ့ စီးပွားရေးအတွက် ဥပဒေသစ်များကိုလည်း ဖွင့်ပေးနေပါပြီ။ ဒီတော့ ကျနော်က ကျနော့်ကတိတည်ဖို့ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကမ်းလင့် လက်ကို ဆန့်တန်းဖို့ရောက်လာခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့ အမေရိကန်သံအမတ်ရန်ကုန်မှာရှိနေပြီ၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ ကိုလည်းဖြေလျော့ထားပါပြီ။ ဒီနိုင်ငံရဲ့ လူထုအတွက် အခွင့်အရေးတွေပေးလာမယ့် ကမ္ဘာ့ကြီးရဲ့ တိုးတက်မှုကို မောင်းနှင်ပေးမယ့်အင်ဂျင်တလုံးအဖြစ် ရပ်တည်လာမယ့် စီးပွားရေးတရပ်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာမှာ ကျနော်တို့ကူညီပံ့ပိုးသွားပါ့မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီထူးခြားလှတဲ့ ခရီးက အခုက အစသာရှိပါသေးတယ်။ ကျနော်တို့ အများကြီးဆက်သွားရဦးမယ်။
ထိပ်ပိုင်းက ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေက ဒီမိုကရေစီအခြေခံဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ သဘောဆန္ဒနဲ့ ကိုက်ညီရပါလိမ့်မယ်။ကျနော်တို့ မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု
ရောင်ခြည်ဖြိုးဖျ ကလည်း ငြိမ်းသွားလို့မရပါဘူး။ ဒီမီးလျှံလေးက ဒီနိုင်ငံရဲ့ လူထုအတွက် ထိန်လင်းတဲ့ ဓူဝံကြယ်ကြီးမဖြစ်မနေ ဖြစ်လာရပါတယ်။ ဒီအတွက် အားထုတ်ရာမှာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုက ကျနော့်အတွက် ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက် အရေးကြီးလှပါတယ်။ ကျနော်တို့ လာခဲ့ကြတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေမတူညီကြပေမယ့် ကိုယ့်ခေါင်းဆောင်ကို ကိုယ်ရွေးချင်တာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ချင်တာ၊ ပညာရေးတရပ်ကို ရရှိပြီး ကောင်းမွန်စွာ အသက်မွေးချင်တာ၊ ကိုယ့်မိသားစုတွေနဲ့ ကိုယ့်အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေအပေါ် မေတ္တာထားချင်တာဆိုတဲ့ ကျနော်တို့အိမ်မက်တွေက တူညီကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် လွတ်လပ်မှုနဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေက ဒြပ်မဲ့သဘောတရားမဟုတ်ပါဘူး။ လွတ်လပ်မှုက လူသားတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကို ဖြစ်လာစေတဲ့ တခုတည်းသော အရာဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုက မဲရုံမှာသာမဟုတ်ဘဲ ကျနော်တို့်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀မှာပါ ရှိနေရမှာပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ သမ္မတတဦးဖြစ်တဲ့ ရုစဖဲ့က ဒီအမှန်တရားကို နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အရေးက မဲပေးပိုင်ခွင့်ထက် ထက်ပိုတယ်လို့ဖွင့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်၊ လိုချင်မှုများက လွတ်လပ်ခွင့်၊ သက်ဝင်မှုများက လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်လေးရပ်ကို လက်ကမ်းကြဖို့ ကမ္ဘာကြီးကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီလွတ်လပ်ခွင့်လေးခုက တခုအပေါ် တခုအပြန်အလှန် အားဖြည့်နေပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း ဒီလေးခုထဲက တခုကိုမဖော်ဆောင်ဘဲ ကျန်တခုကို မရနိုင်ပါဘူး။ အဲဒါက လူအားလုံးအတွက် ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ အနာဂတ်ပါပဲ။ အားလုံးပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာပါပဲ။
ကျနော်တို့က လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကို ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ပြည်သူတွေရဲ့အသံတွေကို ကြားနိုင်ပြီး အစိုးရတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒကို သိနိုင်မှာပါ။
ဒီအခွင့်အရေးတွေကို ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူညီနိုင်ပါဘူး။ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ အင်အားကိုသာ စုစည်းသွားမယ်ဆိုရင် ဒီနိုင်ငံက ပိုပြီး ခိုင်မာတောင့်တင်းမယ်ဆိုတာ အငြင်းပွားစရာမရှိပါဘူး။ အဲဒီအချက်ကပဲ နိုင်ငံများကို အောင်မြင်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချက်ကိုသာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးက စတင်ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အမိန့်နဲ့ ချုပ်ခြယ်ထားမယ့်အစား လူထုရဲ့စုဝေးခွင့်ကို အခုအခါမှာ အပြည့်အ၀လေးစားရမယ်။ မီဒီယာဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှု အသံတွေကိုပိတ်ဆို့ထားမယ့်အစား မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို ဆက်ပေးထားရပါလိမ့်မယ်။ ဒီခြေလှမ်းတွေကို လှမ်းသွားရင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီခရီးကို ရောက်ရှိဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ရေးကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံသားများရဲ့ အသံကို လျစ်လျူရှုထားမယ့်အစား ကြားနာပေးခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီများကိုလည်း ဥပဒေပြင်ပကလို့သတ်မှတ်မယ့်အစား နိုင်ငံရေးပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း မဲဆန္ဒရှင်တဦးက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ မိဘတွေ၊ ဘိုးဘွားတွေ အခုလို မဲပေးခွင့်ရအောင်အစောင့်ကြီး စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပေမယ့် မြင်မသွားကြရပါဘူးတဲ့။ မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ အာဏာရှိသူများက လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အမေရိကန်စနစ်ကို ရေးဆွဲထားတာပါ။
အမေရိကန်က ကမ္ဘာပေါ်မှာ အင်အားအကြီးဆုံး စစ်တပ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပေမယ့် အရပ်သားထိန်းချုပ်မှုအောက်ကို စစ်တပ်ကို ထားရှိပါတယ်။ အခု ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တဦးအနေနဲ့ ကျနော်ဖြစ်ချင်တာတွေကို ဇွတ်အတင်းပြဋ္ဌာန်းလို့မရပါဘူး။ အဲလိုလုပ်လို့ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးရုံသာ တွေးမိပါတယ်။ တရားသူကြီးတွေကိုလည်း ကျနော်ခန့်ထားပါတယ်။ သူတို့ကလည်းကျနော့်ကိုစစ်တယ်၊ ကျနော်ရဲ့အာဏာကို စစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုတရားစီရင်ရမယ်လို့ ကျနော်ပြောလို့မရပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆင်းရဲတဲ့ကလေးတဦးကစပြီး သမ္မတအထိ လူတိုင်းလူတိုင်းက ဥပဒေအရ တန်းတူညီတူ ခံစားခွင့်ရှိလို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် တရားသူကြီးတွေက ကျနော် ဥပဒေလိုက်နာသလား၊ မလိုက်နာဘူးလားဆိုတာကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါက မြန်မာပြည်သူတွေ လှမ်းကိုင်ရမယ့် အနာဂတ်ပါပဲ။ ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျနေသူတဦး တည်းရှိနေရင်တောင်မှ များလှပါပြီဆိုတဲ့ အနာဂတ်။ ဘယ်ခေါင်းဆောင်ထက်မဆို ဥပဒေက ပိုလို့ ခိုင်မာအားရှိတဲ့အနာဂတ်၊ တာဝန်ခံတဲ့ အစိုးရတွေ၊ ဘယ်ကလေးမှ စစ်သားမလုပ်ရ၊ ဘယ်အမျိုးသမီးမှ ခေါင်းပုံမဖြတ်ခံရတဲ့ အနာဂတ်၊ သူတို့ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ အနာဂတ်၊ အရပ်သားများရဲ့ လက်အောက်မှာ အလုပ်အကျွေးပြုနေတဲ့ တပ်မတော်ကသာ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကို ခိုင်မာစေတဲ့ အနာဂတ်၊ လူထုက ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်သူများကသာ အုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက အာမခံချက်ပေးတဲ့ အနာဂတ်ကို ဆိုလိုပါတယ်။
အဲဒီခရီးကို ချီတက်ရာမှာ အရပ်သားလူ့အဖွဲ့အစည်းကို အားရှိလာအောင် ကျနော်တို့ ကူညီထောက်ပံ့မှု အသုံးပြုပြီးတော့သော်လည်းကောင်း တပ်မတော်ကိုလည်း တပ်ကိုကျွမ်းကျင် ပြုလုပ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးများကို ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီခရီးရောက်ရေးမှာ စီးပွားရေးနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ဖော်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံက ဒီလမ်းကြောင်းတလျှောက် ကို ဖော်ဆောင်ရေးကို ကူညီသွားမှာပါ။
ဒီခရီးကို ရှေ့ဆက်သွားရာကနေ လူတိုင်းက လိုအင်ဆန္ဒများ လွတ်လပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံတဲ့ ဒုတိယလွတ်လပ်ခွင့်ကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။
ဟာနေတဲ့ ၀မ်းတွေ ဖြည့်ပေးရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ လူထုက တင်မြှောက်တဲ့ အစိုးရ ၊ လူထုအတွက် အစိုးရက ပိုပြီးကြွယ်ဝမှုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာက သမိုင်းက သက်သေပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ တွဲဖက်ဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုတာ အဲဒါပါပဲ။ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက် ပြောခွင့်ရှိလာတဲ့အခါ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ မြေကို ယူလို့မရပါဘူး။
ဒါကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများမှာ ကိုယ်နေထိုင်ရာမြေ ကိုယ်အလုပ်လုပ်ရာ မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့် အထောက်အထားဆိုတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးအနက် အခြေခံအကျဆုံး နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်။
လူတွေရဲ့ပါရမီအစွမ်းအစတွေကို ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါ အခွင့်အလမ်းတွေကို လူတိုင်းအတွက်ဖန်တီးပေးနိုင်မှာပါ။
အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို ထားရစ်နိုင်ခဲ့မှ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဖန်တီးနိုင်မှာပါ။အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေက ပွင့်လင်းမှုနဲ့အမြင့်ဆုံးစံသတ်မှတ်ချက်တွေကို လိုက်နာဖို့ တိုက်တွန်းနေပါတယ်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးက ဆာလောင်နေသူတွေ၊ ဖျားနာသူတွေ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရှိ၊ ရေမရှိဘဲ နေရသူတွေဆီ ရောက်ရှိဖို့ လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံက သူ့တာဝန်သူယူသွားပါမယ်။ အာရှစပါးကျီဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကိုယ့်လူထုကို ထမင်း၀၀ကျွေးနိုင်၊ ကိုယ့်ကလေးတွေကို စာသင်ပေးနိုင်အောင်၊ကိုယ့်ပြည်သူတွေ အိမ်ဆောက်ပေးနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ မိတ်ဖက်နိုင်ငံတဦးအဖြစ် အမေရိကန်က ရပ်တည်သွားမယ်။
တတိယလွတ်လပ်ခွင့်က လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်နဲ့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာပါပဲ။ ဒီတိုင်းပြည်မှာလည်း မတူကွဲပြားမှုတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းက ဘာသာတခုတည်းကို ကိုးကွယ်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ ဘုရားတွေ၊ ခရစ်ယာန်တွေ၊ ဗလီတွေ ရှိနေကြပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတရာကျော်ကလည်း အခန်းကဏ္ဍတခုကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။ မရေမတွက်နိုင်တဲ့အသက်ပေါင်းများစွာပေးဆပ်ခဲ့ရတယ်။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်မှုမရှိဘဲ ဘယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှ မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး။အခုအခါမှာတော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အသွင်ပြောင်းနိုင်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ်အပါအ၀င် ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းတခုကို ရရှိနေပါပြီ။ ဒီအားထုတ်မှုက လိုအပ်နေသူအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီတွေရရှိနိုင်ဖို့၊ ရွှေ့ပြောင်းခံရသူတွေ ကိုယ့်နေရပ်ကိုယ်ပြန်နိုင်ဖို့ အပါအ၀င် ပိုမိုတရားမျှတပြီး ပိုမိုတည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်သွားဖို့လိုပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို တွေ့မြင်ရပြီး တင်းမာမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်နိုင်မယ့် အန္တရာယ်ကိုမြင်နေရပါတယ်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအပါအ၀င် ဒီပြည်နယ်လူထုတွေက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနဲ့ တရားလွန်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဒဏ်ကို ကာလရှည်ကြာစွာရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အပြစ်မဲ့သူများကို အကြမ်းဖက်မှုအတွက် ဘာဆင်ခြေမှ ပေးလို့မရပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာတွေလည်း အခြားပြည်သူတွေလို၊ ကျနော့်လို သူတို့မှာလည်း သူတို့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့သူတို့ရှိပါတယ်။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် အချိန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်တို့အားလုံးရဲ့ လူသားဖြစ်တည်မှုအတွက် ဒီနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက် ရည်မှန်းပြီး သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ရပ်တန်းကရပ်ဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ တရားမျှတမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ ဒီပြည်နယ်က ပြည်သူပြည်သားများရဲ့ အရေးကိစ္စ အစိုးရဆောင်ရွက်မှုကို ကျနော်ကြိုဆိုပါတယ်။
မတူကွဲပြားမှုဆိုတာက အင်အားဆိုတာ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်။ အားသာချက်ပါ။ အားနည်းချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုပြောရတာ ကျနော့်နိုင်ငံနဲ့ ကျနော့်ရဲ့ဘ၀ပေးအတွေ့အကြုံရ ကျနော်သိလာတာပါ။ ဒီခရီးစဉ်ကြောင့် လူတွေအများစုကို အားကျစေမယ်။ ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို အောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်လား၊ မလုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ စမ်းသပ်မှုကြီးလည်းဖြစ်တယ်။
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်တွေကို ရွေးချယ်စရာ ကမ်းလှမ်းချင်ပါတယ်။ နူကလီးယားလက်နက်တွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းပေါ် တက်လှမ်းလာခဲ့ပါ။ အမေရိကန်ဘက်က လက်ကမ်းကြိုဆိုပါ။ ၂၁ ရာစုမှာ တောင်မြောက်ကွဲပြားမှုတွေကို ဆက်စွဲစရာမလိုပါဘူး။ အဲလိုကမ္ဘာမျိုးကို သမိုင်းဝင်ရန်ကုန်ခရီးကနေ စတင်တည်ဆောက်လို့ရပါပြီ။ ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့ အများကြီး ၀ိုင်းပစ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အခုတော့ ဒီနိုင်ငံက ပြနိုင်တာက အစကောင်းမှုရဲ့ စွမ်းအားပါ။ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်လှမ်းရာမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုပါ တပါတည်း တွဲယူသွားနိုင်တာကို ပြနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံထဲမှာ ခင်ဗျားတို့ ရနေတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေကို မရဘဲ ဆုံးရှုံးနေရသူတွေ မရေမတွက်နိုင်အောင် ရှိတယ်ဆိုတာ သိထားလို့ပါ။ လျှပ်စစ်မီးမရတဲ့သူတွေ၊ လွတ်မယ့် ရက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ ယုံကြည်ချက် အကျဉ်းသားတွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ အလှမ်းဝေးနေတဲ့ နေရပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ၊ ထွက်ပြေးနေရသူတွေလည်း စခန်းတွေမှာ ဆက်ရှိနေပါတယ်။ ဒီနေ့ပြောပါရစေ၊
ဒီနေ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲံ ပြည်သူအားလုံးကိုလည်း ပြောချင်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ ဆက်ပြီး ရပ်တည်သွားမယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေ ဖြစ်ပျက် ခံစားရတာတွေ ကျနော်တို့ခေါင်းထဲမှာရှိ်နေပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေလည်း ကျနော်တို့ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ကိန်းဝပ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၂၁ ရာစုမှာ နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတာ၊ နိုင်ငံတွေကြားက အတားအဆီးတွေ ပြိုလဲသွားတာတွေကြောင့် လွတ်လပ်မှုရဲ့ရှေ့တန်းနယ်မြေတွေက နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲ ရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတဦးကပြောပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ပြည်သူတိုင်းရဲ့အလုပ်ပါ။ နိုင်ငံရေးသမား တွေရဲ့အလုပ်သက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံသားတဦးကောင်းဖြစ်ဖို့ အဲဒီအချက်ရှိဖို့လိုပါတယ်။တာဝန်သိတဲ့ နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ဖို့။ အခုလို ထူးခြားတဲ့ကာလ စိန်ခေါ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေပေမယ့် အပြောင်းအလဲ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးကျရင် ရလာမယ့် လွတ်လပ်မှုအတိမ်အနက်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးရမှာက မြန်မာပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တဦးချင်စီတိုင်းမှာကို စစ်မှန်တဲ့တော်လှန်ရေး၊ ပြောင်းလဲလိုစိတ်တွေ စမွေးမြူပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ခေါင်းဆောင်တွေပြခဲ့တဲ့ သတ္တိမျိုးရှိ်ဖို့လိုပါတယ်။ လာမယ့် ရှေ့ခရီးလမ်းမှာ ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ အပြောင်းအလဲလုပ်လိုသူတွေကို ခုခံဆန့်ကျင်မယ့်သူတွေရှိလာမှာပါ။
ဒါပေမယ့်ယုံကြည်မှု အပြည်နဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ ကျနော်ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ ရွေ့လျားမှုတွေ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေစတင်နေပါပြီ။ နောက်ပြန်ဆွဲလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်အင်အားနဲ့ ဒီနိုင်ငံကို တိုးတက်အောင်လုပ်ယူပြီး ကမ္ဘာကြီးအတွက်လည်း အတုယူစရာသင်ခန်းစာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ခရီးလမ်းကြီးက ရှည်ပါသေးတယ်။ ဆက်လျှောက်ရဦးမှာပါ။ ပန်းတိုင်ရောက်မယ်လို့ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်။
Posted: 20 Nov 2012 02:54 AM PST
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) menafikan dakwaan yang dibuat Timbalan Pengerusi Barisan Nasional (BN) Selangor, Datuk Seri Noh Omar mengenai anak syarikat PKNS iaitu Worldwide Holdings Bhd (WHB) yang dikatakan merancang menjual sebahagian pegangan sahamnya bernilai RM 150 juta kepada syarikat bukan Bumiputra.
"PKNS menubuhkan anak syarikat untuk memiliki aset komersial PKNS dan proses pertukaran nama pengarah serta pemegang saham 'shell company' ini diuruskan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Setiausaha Syarikat."
"Ini adalah isu pentadbiran yang biasa dilakukan dan melibatkan SSM serta Setiausaha Syarikat," katanya yang menyifatkan tuduhan berkenaan sebagai tidak berasas dan mengelirukan.
"PKNS dan WHB tidak berminat untuk terlibat dalam polemik politik dan menggesa agar pihak yang terlibat untuk memeriksa dan memastikan kesahihan fakta terlebih dahulu sebelum melontarkan sebarang dakwaan di media," katanya lagi. -pkns
Posted: 20 Nov 2012 01:23 AM PST
KPMG STATEMENT TO KERAJAAN NEGERI SELANGOR ON THE TALAM DEBTS RESTRUCTURING AND RECOVERY EXERCISE (https://docs.google.com/file/d/0B1zOCiKO4MgMMWRzUTZUZGR1TVk/edit) KERTAS PUTIH PELUNASAN MENYELURUH HUTANG TALAM (https://docs.google.com/file/d/0B1zOCiKO4MgMM0gwWHBKenRVTW8/edit) Senarai hartanah yang dilunaskan tanpa bebanan (https://docs.google.com/file/d/0B1zOCiKO4MgMQWlMR3NlVHRUTFE/edit)
Posted: 19 Nov 2012 11:23 PM PST
Ucapan perbahasan semasa membahas Enakmen Perbekalan (2013) 2012 Peringkat Dasar Bacaan Kali Kedua oleh ADUN Kampung Tunku di Shah Alam: 1. Saya mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Selangor (KNS) pimpinan YAB Dato Menteri Besar kerana berjaya membentangkan Belanjawan 2013 berimbang buat tahun kelima berturut-turut. 2. Dalam kesibukan kita bersiap sedia menghadapi masa depan yang penuh
Posted: 19 Nov 2012 11:17 PM PST
ရခိုင်ပြည်နယ် တကျော့ပြန် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားပြီး နောက် အောက်တိုဘာ (၂၁)ရက်တွင် မြောက်ဦးမြို့ အောင်တပ် ရပ်ကွက် တွင် နေထိုင်သော ဆန်ကုန်သည် ဦးကျော်ဇောဖြူ သေဆုံးသည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မြောက်ဦးမြို့ ရှိ ရခိုင်(၁၂)ယောက်အား စွပ်စွဲ ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း ဒေသခံများ နှင့် ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရသူ၏ ဆွေမျိုး များပြောပြချက်အရသိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက် ပြီးမြောက်ဦးဒေသခံများပြောဆို နေကြသည်မှာ "အဲဒီနေ့က (၂၁. ၁၀.၂၀၁၂)က သေဆုံးသွားတဲ့ ကိုကျော်ဇောဖြူကို မြောက်ဦးမြို့ သားတွေက ဘင်္ဂါလီတွေကို ဆန်ပို့ရောင်းချနေတာကို ရပ်တန့်ဖို့ အတွက် ထောင်ချီတဲ့လူအုပ်ကြီး နဲ့သွားတားကြတယ်၊အဲလို သွား တားတဲ့အချိန်မှာ ကိုကျော်ဇောဖြူ က သူ့ဆီကို လူတွေအများကြီး လာတာတွေ့တော့ အိမ်ပေါ်က ဆင်းပြီးတော့ ဓားနဲ့ရမ်းတယ်။ အနားမှာရှိတဲ့ လူနှစ်ယောက်ကို ထိသွားတော့ လူအုပ်ကဒေါသ ထွက်ပြီး ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်လိုက် တော့ လက်လွန်ပြီးသေသွားတယ်၊ အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ လုံထိန်း ရဲတပ်ရင်းက ရဲဘော်တွေ၊မြို့နယ် ရဲတွေ အကုန်လုံးရှိပါတယ်၊ အဲဒီ နေ့ ညနေမှာပဲ (ဦးသိန်းဆွေ၊ဦး အောင်ကျော်၊ကိုအောင်အောင်၊ ကိုမောင်ကြီး၊ကိုမောင်ညွှန့်လှိုင်) အပါဝင် လူ(၁၂)ယောက်ကို မြောက်ဦးမြို့နယ်ရဲတွေက လာ ဖမ်းသွားပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့ မှာ (၈)ယောက်ပြန်လွတ်ပေးတယ် လို့ကြားပါတယ်၊အခုတော့ လွတ် ပေးတဲ့(၈)ယောက်ထဲက ငါး ယောက်ကိုပြန်ဖမ်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်ဟု မြောက်ဦးဒေသခံ တစ်ဦးကပြောသည်။
ယခုလက်ရှိ ဖမ်းဆီးခံထား ရသည့် သူများထဲက ဆွေမျိုးတော် စပ်သူတစ်ဦးကပြောဆိုရာ ""ကျွန်မ တို့ အခုထိထောင်ဝင်စာ မတွေ့ရဘူးဖမ်းထားတဲ့ အထဲက ပြန် လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့သူတွေပြောပြ တာတွေက၊ကိုကျော်ဇောဖြူကို သတ်ပါတယ်လို့ ၀န်မခံမချင်း ရိုက်နှက်နေတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ တကယ်သတ်ခဲ့ရင်တောင်မှ ဥပဒေ နဲ့အညီဆောင်ရွက်စေချင်ပါတယ်"" ဟု ဖမ်းဆီးခံရသူ ဦးသိန်းဆွေ ၏ အမျိုးသမီး ဒေါ်ခင်လှယဉ်က ပြောဆိုသည်။
ယင်းအမှုအခင်းနှင့်ပတ်သက် ပြီး မြောက်ဦးမြို့နယ်ရဲစခန်းသို့ သတင်းထောင်(၂၀)ခန့်သွား ရောက်ဆက်သွယ် စုံစမ်းသည့်အခါ မြောက်ဦးမြို့နယ် စခန်းမှူးမှာ ပြင်ပဧည့်သည်များအပြင် မီဒီယာများကိုပါ လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်းမရှိသဖြင့် မတွေ့ဆုံခဲ့ရသော်လည်း မြောက်ဦးမြို့နယ်ရှိ ရပ်မိရပ်ဖများက အဆိုပါဖြစ်ရပ်မှာ ဟုတ်မှန် ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
မှီငြမ်းသတင်း – Hot News
ဇွန်လ ဆန်းမှ စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ၇ခိုင်ပြည်မှ မွတ်စလင်များအား အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရရုံသာမကဘဲ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ဆေးဝါးများကိုပါ ရောင်းချခြင်းမပြုရန် ရခိုင်တပြည်လုံးအနေဖြင့် ရခိုင်လူမျိုးများမှ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ မွတ်စလင်မ်များအား ရိက္ခာရောင်းသည့် အဆက်အဆံပြုလုပ်သည့် သဘောထားပျော့ပြောင်းသော ရခိုင်လူမျိုးများကို လဲ အဆိုပါအစွန်းရောက်ရခိုင်များက ယခုကဲ့သို့ ခြိမ်းခြောက်သတ်ဖြတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted: 19 Nov 2012 11:03 PM PST
အစိုးရကလည်း လွတ်ထားပေးရုံတင်မကဘူး မြောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်ပေးတယ်။ အတိုက်အခံဆိုတဲ့ လူတွေ လည်း အတူတူပဲ။ သူတို့ ကိုယ် တိုင်က ကုလားမုန်းတီးရေးကို မရှက်မကြောက်လုပ်နေတဲ့ထဲမှာပါတယ်။ မသိချင် ဟန်ဆောင်ပေးနေတယ်။ မီဒီယာတွေက လူသတ်မီဒီယာ တွေဖြစ်ကုန်တယ်။
ခင်ဗျားတို့စော်ကားတဲ့ အတိုင်းတာ ကျော်လွန်နေပြီ။ ကျူပ်တို့သည်းခံနေသမျှ ဆက်ပြီး မိုက်ရိုင်းနေမယ်ဆိုရင် ကျုပ်တို့မငြိမ်းချမ်းသလို ခင်ဗျားတို့ လည်း ငြိမ်းချမ်းမယ်မထင်နဲ့ ။ ဖိတိုင်းလည်း ပိမယ်မထင်နဲ့ ။
သူတို့ ကျတော့ ဆတ်ဆတ်ထိမခံ။ သူတို့ လူထိရင် ကမ္ဘာမီးလောင်သလိုပဲ။ ကျူပ်တို့ ကိုကျတော့ စော်ကားနေတာ
ကျူပ်တို့ ကို စော်ကားတဲ့လူတွေ အတိုင်းအတာကျော်လွန်သွားပြီ။ ကျူပ်တို့ က ငြိမ်ခံနေရအောင် သူတို့ က ဘာ တွေလဲ။ ကျုပ်တို့ ကဘာတွေ လဲ။
ကျုပ်မမေ့ဘူး။ ဒီလူတွေရဲ့ ပက်ပက်စက်စက်စော်ကားမှုတွေအတွက် ကမ္ဘာမကြေဘူး။ ကျုပ်တို့ ကို စော်ကား ခဲ့သမျှ ကျုပ်တို့ပြန်တောင်းရ မယ်။ ၁၀၉ -၁၁၀တွေ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်စာလောက်တတ်တဲ့ကောင်တွေ၊ လူရိုင်းတွေ၊ စိတ်ဓာတ်နဲ့ပါးစပ်ညစ်ညမ်းတဲ့လူတွေ ပြောချင်တိုင်းပြော၊ ဆဲ ချင်တိုင်းဆဲ၊ စော်ကားချင်တိုင်းစော်ကားတာတွေကို ငြိမ်ခံနေရအောင် ကျုပ်တို့ ကေ-ာက်သုံးမကျတဲ့ ငတုံးတွေ၊ နလပိန်းတုန်းတွေ၊ ငဖျင်း င တူးတွေ၊ ချီးထုပ်တွေမဟုတ်ဘူး။ ကျွေးတာစား ပေးတာယူ လုပ်သမျှ ငြိမ်ခံတဲ့ ကျွန်တွေ၊ အကျဉ်းသားတွေမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန်၊ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား၊ ကိုယ့်မာနနဲ့ ကိုယ်လူလုပ်နေတဲ့ လူတွေဗျ။ မဟုတ်တာမလုပ် မဟုတ်ရင် ငြိမ်မခံတဲ့ လူတွေဗျ လူတွေ။
ဆဲခဲ့စော်ကားခဲ့တဲ့လူတွေ၊ ခွင့်ပြုထားတဲ့ အစိုးရ၊ မသိချင် မမြင်ချင်ဟန်ဆောင်နေတဲ့ အတုိုက်အခံဆိုသူတွေ၊ မြောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်ပေး တဲ့ မီဒီယာတွေ ကျုပ်တို့ ကို မတောင်းပန်မချင်း၊ ကျုပ်တို့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျုပ်တို့ မာန တွေကို အသိအမှတ်မပြုမချင်း မကျေနပ်ဘူး။ ကမ္ဘာတည် သ၍မကျေနပ်ဘူး။ Action တိုင်းအတွက် Reaction ဆိုတာ ရှိသမြဲပဲ။ ဖိတိုင်းပိမယ် တော့မထင်နဲ့ ။ ကျူပ်တို့ ဘာသာက သူတပါးကို မတ ရားစော်ကားခွင့်မပေးထားဘူး။ နှိပ်စက်ငြင်းပမ်းခွင့်မပေး ထားဘူး။ မတရားမှုနဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုလည်း ငြိမ်ခံဖို့ မပြောထားဘူး။
လတ်တလော ကျုပ်တို့ ဖက်က တောင်းဆိုရမယ်။
(၁) အင်တာနက်စာမျက်နှာများမှာ ကျူပ်တို့ ကို စော်ကားဆဲဆိုနေတာချက်ချင်းရပ်
(၂) ဘုန်းကြီးတွေနဲ့မျိုးချစ်ဆိုသူတွေဦးဆောင်ပြီး ကုလားဆန့် ကျင်ရေးဟောပြောလှုပ်ဆော် စာပေဖြန့် ချိနေတာချက်ချင်းရပ်
(၃) မီဒီယာတွေမှာ ကုလားတွေမနာနာအောင် ရေးသားနေတာတွေချက်ချင်းရပ်
(၄) ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့အစ္စလာမ်အားဆန့် ကျင်ရေးသား လှုပ်ဆော်စည်းရုံးနေတဲ့ လူ၊ ဘုန်ကြီး၊ နိုင်ငံရေးသမား၊ သတင်းသမား အားလုံးကို တားဆီးပြီး ဆက်လက်ရေးသားလှုပ်ဆော် ဟောပြောနေသူတွေကို အရေးယူပေးပါ။
သူတို့ ဘာသာက သံဃာအဖွဲ့ အစည်းတွေကို ပြောကြည့်လေ။ ဘုန်းကြီးတွေဦးဆောင်ပြီး ကုလားအိမ်ဖျက်၊ ဗလီ မီးရှို့လူသတ်ပစ္စည်းလုလိမ့် မယ်။ သူတို့ ဘုန်းကြီးကို နဲနဲလေးပြောကြည့်လေ။ မအေနှမမပြောနဲ့အပြုသဘောနဲ့ ဝေဖန်ရင်တောင်ရလို့ လား။
ထွန်းထွန်းခင်က ၁၀ တန်းအောင်ပြီး ကြုံတဲ့နေရာမှာသောက်တယ်။ တိုးအိပ်ချင်တဲ့နေရာမှာ အိပ်တယ်။ သူမူးတိုင်း ဂေါ်ရခါးကျော်ခိုင်က လိုက်ဆွဲရတယ်။ ဘုံကထိန်အတွက်ကောက်ထားတဲ့အလှူငွေကို ကာရာအိုကေပေါ်စ အဲ့ဒီမှာ ကောင်မလေးတွေနဲ့ သွားဖြုန်းပစ်တယ်။ အဲ့ဒီ လိုလူစားမျိုး။ အမေနဲ့ ပြသနာတတ်ရင် သူ့ အမေက လမ်းထိပ်အထိလိုက်ရိုက်လို့ငိုငိုပြီး အော်အော်ပြီးထွက်ပြေးတယ်။ ဘယ်လောက်ပေပေ တေတေ အမေအရိုက်ကြမ်းလို့အမေကိုကြောက်တယ်။ တရက် စကားများပြီး အမေလိုက်ရိုက်လို့ ထွက်ပြေးရာက အမေက ငါ့တုတ်ကိုမ ကြောက်ရင် သတ္ထိရှိရင်ပြန်လာဆိုပြီး ရိုက်လိုက်လို့ထွက်ပြေးတယ်။ လူလို အိမ်မပြန်လာရဲတော့ နောက် ၃ ရက်လောက်နေမှ ဘုန်းကြီး ၀တ် ပြီးပြန်လာတယ်။ လမ်းထောင့်ရောက်တော့ ဂေါ်ရခါး ကျော်ခိုင်က သူငယ်ချင်းဆိုးမလို့"ဟေ့ကောင် ငါ -ီး လိုပဲ မင်းကလဲ ဘုရားဖြစ်မဲ့ အုတ်ခဲ" လို့ ပြောတာကို လမ်းထောင့်ကွမ်းယာဆိုင်မှာ ကွမ်းဝယ်နေကြ လက်တွန်းလည်းသမားတွေက ကြားသွားပြီး ဘာမသိညာမသိနဲ့ကုလားက ဘုန်းကြီးကို စော်ကားတယ်ဆိုပြီးဆဲရာက အပြန်အလှန်ပြန်ဆဲကြပြီး ထိုးမယ် ကြိတ်မယ်တွေဖြစ်တော့ ရ၀တ ရုံး ရောက်သွားတယ်။ နောက် တခါ ဒီလိုမဖြစ်အောင်ထိန်းဖို့ လို့ ဆိုပြီး သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကို ခေါ်တော့ ကျုပ်တို့ ရပ်ကွက်ထဲက ဗလီဆရာနဲ့ဗလီ ဂေါဗကဥက္ကဌကို သွားခေါ်လာတယ်။ ဂေါ်ရခါးနဲ့ဗလီဆရာဘာ ဆိုင်လို့ လဲ။ ဂေါ်ရခါးနဲ့မွတ်စလင်မ်တောင်မကွဲတဲ့လူတွေ၊ ရပ်ကွက်လူကြီးမင်းတွေ။
ဗလီဆရာနဲ့ဂေါပကဥက္ကဌကလည်း ပြသနာ ဆက်မဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီး ဂေါ်ရခါးနဲ့မွတ်စလင်မ်သက်သက်ဆီဆိုတာနဲနဲပါးပါးရှင်းပြပြီး ကျန် တာ "ဟုတ်ကဲ့ပါ" လုပ်ခဲ့ရတယ်။ စာအုပ်မရှိတဲ့ ရပ်ကွက်စာကြည့်တိုက်အတွက် အလှူငွေ ထည့်ပေးခဲ့ရတယ်။ ကျူပ်တို့ လူမှားတာမှမဟုတ် တာ ကျူပ်တို့ ဖက်က ဘာကိစ္စ ခေါင်းညိမ့်ခဲ့ရတာလဲ။ "ဟေ့လူတွေ၊ ခင်ဗျားတို့အရှုပ်ထုပ်ခင်ဗျားတို့ ရှင်း၊ ကျူပ်တို့ နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး၊ သောက်ဂရုလည်းမစိုက်ဘူး၊ အားလည်း မအားဘူး၊ ဘာအလှူငွေမှလည်း မထည့်နိုင်ဘူး" လို့ပြန်မကျဲခဲ့သင့်ဘူးလား။
တလောကပဲ အသက် ၈၀ ကျော် ကရင်အဖိုးကြီးတယောက် ဘုန်းကြီးတွေ ဆွမ်းခံတဲ့လိုင်း ကြားထဲ ဖြတ်လျှောက်လို့ ဆိုပြီး ဘုန်းကြီးတွေ ၀ိုင်းရိုက်လို့ သေသွားတယ်။ အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကဆို အလကားနေရင်းရိုက်သတ်ခံလိုက်ရတာ။ ဘာမှ ပြောတာ၊ ဆိုတာ၊ ဆဲတာမဟုတ်သေးဘူး။ ဘာမှစော်ကားတာမဟုတ်ဘူး။လိုင်းဖြတ်လျှောက်လို့ ဆိုပြီး ရိုက်သတ်ခံလိုက်ရတာ။
Source>>>ကျူပ်တို့ကုလားတွေေ-ာက်သုံးမကျလို့လား M media နိုဝင်ဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၂
Posted: 20 Nov 2012 12:46 AM PST
Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) mengesahkan terdapat pelbagai kesilapan dalam daftar pemilih, kata pemimpin Pakatan Rakyat (PR) hari ini.
"Semua kebimbangan dan keraguan kami terbukti adalah benar. Ia bukan satu tuduhan liar, tapi ia berdasarkan penemuan sah yang disahkan sendiri oleh SPR," kata naib presiden PKR, Nurul Izzah Anwar kepada wartawan selepas mesyuarat dengan SPR bersama 40 ahli parlimen (MP) hari ini.
"Mereka kata mereka juga manusia. Tidak sempurna.
"Tolong sampaikan kebimbangan ini dan tolong beri kami satu jaminan bahawa anda tidak boleh mengadakan pilihan raya sehingga semua perkara ini diselesaikan," kata beliau.
MP PKR, Fuziah Salleh dan DAP, Anthony Loke yang turut hadir dalam sidang akhbar tersebut juga mendedahkan pelbagai kesilapan dalam daftar pemilih yang diakui sendiri oleh SPR sendiri hari ini.
Fuziah berkata terdapat 40 ribu pengundi yang nama mereka hilang dalam daftar pemilih disebabkan status kematian mereka tetapi mereka kemudiannya didaftarkan sekali lagi.
Beliau menambah terdapat pengundi meragukan yang berumur melebihi 90 tahun.
Menurut Fuziah lagi, SPR memberitahu bahawa peraturan pilihan raya menyatakan mereka tidak dibenarkan untuk membuang nama melainkan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) mengesahkan pengundi tersebut meninggal dunia.
Fuziah juga berkata terdapat 2, 709 kes di mana pengundi yang ditempatkan semula di negeri yang salah lokalitinya walaupun alamat mereka menetap masih sama.
"SPR berkata mereka telah berhenti melakukannya, tetapi penemuan kami menunjukkan mereka masih terus melakukannya lagi," dakwa Fuziah.
Dalam pada itu juga, Fuziah mendakwa seramai 7, 958 pengundi baru yang ditemui "muncul tiba-tiba" dalam daftar pengundi tanpa dipaparkan terlebih dahulu sambil mengatakan perkara tersebut berdasarkan data-data terbaru daripada Disember 2011 hingga suku hujung tahun ini.
Loke pula berkata rekod menunjukkan hampir 300 ribu pengundi yang telah mendaftar sebelum berusia 21 tahun, umur yang wajib untuk mengundi.
Belia berkata SPR telah mengakui dan membetulkan "kesilapan kemasukkan data" tetapi menyimpan nama dalam daftar pengundi memandangkan semakan SPR mendapati pengundi ini telah mendaftar selepas melepasi umur 21.
Pemimpin PR dan kumpulan aktivis Bersih 2.0 telah lama meminta daftar pengundi yang bersih menjelang Pilihan Raya Umum (PRU) Ke-13.
Antara tujuh permintaan lain Bersih 2.0 adalah mereformasikan undi pos, penggunaan dakwat kekal, minimum tempoh berkempen 21 hari, kebebasan media, memperkukuhkan institusi awam, hentikan rasuan dan tamatkan politik kotor.
Posted: 19 Nov 2012 08:53 PM PST
နိုဝင်ဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၂ M-Media နေသစ်ထွန်း
မွန်ပြည်နယ် အတွင်း နေထိုင်လျက်ရှိ မြန်မာမွတ်စလင်များအား မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ လ၀က ဌာနများမှ ဘင်္ဂလီ လူမျိုး ဟုထည့်သွင်းရေးသားဖော်ပြနေကြောင်း သိရသည်။ " ပေါင်က လ၀က ရုံးမှာ မှတ်ပုံ တင် လုပ်တော့ လ၀က အတင်းပဲ ဘင်္ဂလီ လို့ရေးပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘင်္ဂလီမဟုတ်ဘူး လို့ ပြောတော့ မရဘူး။ ဘင်္ဂလီလို့ ရေးမှ မှတ်ပုံတင် ရမယ် လို့ ပြောတယ် " ဟု မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့နယ် မုတ္တမ ကျေးရွာမှ မြန်မာ မွတ်စလင် တစ်ဦးက ပြောသည်။
မိဘမျိုးရိုးများသည် ဘင်္ဂလီများမဟုတ်သော်လည်း သားသမီးများ၏ မှတ်ပုံတင်များတွင် ဘင်္ဂလီ ဟု ထည့်သွင်း ခံနေရသည်။
" ကျွန်တော် အဖေမှတ်ပုံတင်မှာက ဇေရ်ဘာဒီလူမျိုးလို့ ရေးထားပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကိုကျတော့ ဘင်္ဂလီ / မွန် / ကရင် လို့ ရေးထားတယ်။ ဒီလိုဘာလို့ရေးလဲ ဆိုတာ တောင် ကျွန်တော်မသိရဘူး "ဟု မော်လမြိုင်မှ မြန်မာမွတ်စလင် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
သက်ဆိုင်ရာ လ၀က အရာရှိများသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် များ ဘင်္ဂလီ ၊ သို့မဟုတ် အိန္ဒိယ မျိုးနွယ် အဖြစ် မှတ်ပုံတင်တွင် တွဲဖက် ဖေါ်ပြလျက်ရှိသည်။
"ကျွန်တော်က ကရင်-ဗမာ ပါ။ လ၀ကမှာ မှတ်ပုံတင်လုပ်တော့ ဘင်္ဂလီလို့ ရေးဖို့ လုပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ဘင်္ဂလီ လို့ ရေးမယ်ဆိုရင် အဲဒီမှတ်ပုံတင် ကျွန်တော်မယူဘူး ။ လူမျိုးအမှန်ကို ရေးမှ မှတ်ပုံတင်ယူမယ်လို့ ပြောပြီး ရအောင်မှတ်ပုံတင်လုပ်ခဲ့ရတယ် " ဟု ပေါင်မြို့နယ် နတ်မော်ကျေးရွာ ကရင်တိုင်းရင်းသား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တစ်ဦးက ၄င်းအတွေ့အကြုံကို ပြောပါသည်။
ဘင်္ဂလီစကား ပြောဆိုခြင်း၊ ဘင်္ဂလီ ယဉ်ကျေးမှု ကျင့်သုံးခြင်း၊ ဘင်္ဂလီ ရိုးရာ ၀တ်စုံ ၀တ်ဆင်ခြင်း များမရှိကြပဲ မြန်မာစကား ပြောဆိုခြင်း၊ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု ကျင့်သုံးခြင်း၊ မြန်မာ့ဝတ်စုံ များဝတ်ဆင်လေ့ရှိသူ မြန်မာ မွတ်စလင် များ ၊ တိုင်းရင်းသား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များကို ဘင်္ဂလီ လူမျိုးအဖြစ် လ၀က မှ အဓမ္မ ဖေါ်ပြနေခြင်းသည် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံ များက ပြောဆိုကြသည်။
မွန်ပြည်နယ် မုတ္တမဒေသရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ပသီ(မြန်မာမွတ်စလင်) တို့သည် မွန်ဘုရင်များ လက်ထက် ကပင် နေထိုင်ခဲ့ ပြီး မွန်ဒေသသို့ ကျူးကျော် လာသူများကို ခုခံ တိုက်ခိုက်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာ့သမိုင်း တွင်ဖေါ်ပြထားသည်။
Posted: 19 Nov 2012 08:27 PM PST
မောင်တောမြို့ ကိုင်းကြီး မွတ်စလင်မ်ကျေးရွာ မီးရှို့ခံရနိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၂
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့ရှိ ကိုင်းကြီးမွတ်စလင်မ်ကျေးရွာအား ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် ည ၁၀-နာရီခန့်က အကြမ်းဖက်သမားများက မီးရှို့ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
"အခုည ၁၀-နာရီလောက်က မောင်တောက ကိုင်းကြီးဆိုတဲ့ မွတ်စလင်မ်ရွာကို အကြမ်းဖက်သမားတွေက မီးစရှို့ခဲ့တာ။ နတလကလူတွေပါ မီးရှို့တာက။ မွတ်စလင်မ်အိမ် ၂၀-လောက် လောင်သွားပြီ။ ကျန်တဲ့ သတင်းကို ဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။ အခုတော့ နစက ရောက်လာပြီး မီးမရှို့ဖို့ တားနေတယ်။
ပြဿနာတွေ ငြိမ်နေပြီးအခုမှ ပြန်ထလုပ်တာ အိုဘားမားရဲ့မိန့်ခွန်ုကြောင့်များလားလို့ထင်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း အခု ဖုန်းနဲ့ခြိမ်းခြောက်ခံနေရတယ်။ ဘယ်သူလဲလို့မေးတာလည်းမဖြေဘူး။ ကိုင်းကြီးက မွတ်စလင်မ်တွေအတွက် ဆုတောင်းပေးကြပါဦးဗျာ"လို့ မောင်တောမြို့ခံမှ M-Media ကို ပြောပြလာပါတယ်။
M-Media နေသစ်ထွန်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိခဲ့သော အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စိန်ရတု ခန်းမတွင် မြန်မာပြည်သူများသို့ ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းအပေါ် အကောင်းမြင် အားရကျေနပ်ခဲ့ကြောင်း အိုဘားမား မိန့်ခွန်း တက်ရောက် နားထောင်ခဲ့သူ မြန်မာမွတ်စလင်များက ပြောပါသည်။
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမတွင် မြန်မာပြည်သူများအား မိန့်ခွန်းပြောနေစဉ်
'မွတ်စလင်အရေး ဆိုတာထက် လူအခွင့်ရေးပိုင်းကိုပြောတယ်။ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ကိုပြောတယ်။ သူ့နိုင်ငံနဲ့ ယှဉ်ပြီး မတူကွဲပြားတာတွေကို အားအဖြစ် အသုံးချဖို့ သူ့နိုင်ငံနဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြောပါတယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်နေရာက လာတယ်ဆိုတာထက် နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို ပြောသွားပါတယ်။ ဒါက မွတ်စလင်တွေအတွက် အများကြီးကောင်းပါတယ်" ဟု အစ္စလာမ်ဓမ္မဗိမာန် မှ ဓမ္မကထိက ဦးအေးလွင်က သုံးသပ်ပါသည်။
အိုဘားမား လူ့အခွင့်ရေး ရှုထောင်မှာ ပြောကြားသော မိန့်ခွန်းအပေါ် မြန်မာမွတ်စလင် ကွန်ရက်ဝင် တစ်ဦးမှလည်း ထောက်ခံကြောင်းပြောကြားသည်။
"အားရပါတယ်။ သူပြောတဲ့ အထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စလည်းပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးရှုထောင်ကနေ ပြောသွား တာကောင်းပါတယ် " ဟု မြန်မာမွတ်စလင်ကွန်ရက်မှာ ဦးမျိုးဝင်းက ပြောပါသည်။
"ဒီလို Transition Period မှာ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးက အရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့ ။ အိုဘားမားရဲ့ မိန့်ခွန်းက လက်ရှိဖြစ်နေ တဲ့အခြေ အနေနဲ့ အချိန်ကိုက်ပါပဲ။ ပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို သူကောင်းကောင်း သိနေတယ်" ဟု မြန်မာမွတ်စလင် ကွန်ရက်မှာ ဦးမျိုးဝင်းက သုံးသပ်သည်။
သမ္မတ အိုဘားမား ၏ မိန့်ခွန်းတွင် မတူကွဲပြားမှူ များအား နားလည်ခြင်း ၊ ရိုဟင်ဂျာများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ၊ တိုင်းပြည်ညီညွတ်ရေး တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သူ့မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
"တကယ်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ မတူကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို ကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့လည်း ကျော်လွှားနိုင်ကြမှာဖြစ် ပါတယ်။ မတူကွဲပြားခြားနားမှုဆိုတာ ခွန်အားရှိမှုရဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်… ခင်ဗျားတို့၊ ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာမျိုး ရို ဟင်ဂျာတွေမှာလည်းရှိကြပါတယ်… ဒီတိုင်းပြည်မှာ မတူကွဲပြားမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ စေတီပုထိုးတွေ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေနဲ့ ဗလီတွေ ဟာ ဘေးချင်း ယှဉ်လျက်ရှိနေကြတယ်… အမေရိကန်တွေဟာ ဆယ်စုနှစ်များစွာ မတူကွဲပြားမှုတွေ ရှိနေတဲ့ ကာလတစ်လျှောက် တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူအတွက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားရှိတဲ့နေရာမှာ ညီညီညွတ်ညွတ်ရှိခဲ့ကြပါတယ်" ဟု အိုဘားမားက ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာမွတ်စလင်မ် ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသော ဒေါက်တာမြင့်သိန်(တိုက်ပုံအဖြူ)၊၊ အစ္စလာမ်ဓမ္မဗိမာန် မှ ဓမ္မကထိက ဦးအေးလွင်(တိုက်ပုံအညို)အား သမ္မတ အိုဘားမား မိန့်ခွန်းပြောသည့် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာစဉ်တွေ့ရပုံ
ကုလသမဂ္ဂမှ ကမ္ဘာတွင်အဖိနှိပ်ခံဆုံးလူမျိုး အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသော ရိုဟင်ဂျာများကလည်း သမ္မတ အိုဘားမား မိန့်ခွန်းပေါ် လှိုက် လှိုက်လှဲလှဲ ထောက်ခံကြသည်။ "ရိုဟင်ဂျာတမျိုးသားလုံး ကကြိုဆိုပါ တယ်။ ဒါက မြန်မာ့ သမိုင်းဝင် မိန့်ခွန်းပဲ လို့ မြင်ပါတယ်" ဟု ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသား ဦးကျော်အောင်က ထင်မြင်ချက်ပေးပါ သည်။
မိန့်ခွန်းတက်ရောက် နားထောင်ခွင့်ရသူ မြန်မာမွတ်စလင်အမျိုးသမီး မသဉ္စာ အမြင်ကတော့ " ပညာရေး အကြောင်း အဓိက ပြောသွားတယ်။ နောက်ပြီး Diversity နဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ မတူညီမှုတွေကို နိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေးမှာ အသုံးပြုဖို့ တိုက်တွန်း သွားပါတယ်' ဟု ပြောပါသည်။
အိုဘားမား မိန့်ခွန်းသည် ဘက်စုံထောင့်စုံက ဖိနှိပ်မှု ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ခံနေရသော မြန်မာနိုင်ငံက အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် များအတွက် အားအင်တစ်ရပ်ဟု သဘောထားကြသည်။
"လူနည်းစုဖြစ်တဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ အမြင်အရပြောရတော့ သူ့မိန့်ခွန်းက တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ လူမျိုးရေး ဘာသာရေးအရ ခွဲခြားတာတွေ မလုပ်ဖို့ပြောပါတယ် ။ သူသဘောထားက ရခိုင်ကိစ္စက ဒေသတွင်း တင်မကဘူး ကမ္ဘာကိုပါကူးစက်သွားနိုင်တဲ့ သဘောကို သူပြောသွားတယ်။ မိန့်ခွန်းကိုခြုံငုံကြည့်ရင် မြန်မာ မွတ်စလင် တွေ အတွက်အားဖြစ်စေပါတယ် " ဟု မြန်မာမွတ်စလင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက သုံးသပ်ပါ သည်။
အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား မိန့်ခွန်းပြောကြားသည့် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရသည့် မြန်မာမွတ်စလင်မ် အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ်
(ဓါတ်ပုံ – Popular Myanmar News Journal)
"အိုဘားမားက နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းတွေကို အဓိက ထားပြီး ပြောတာကို သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည် နဲ့ အခြား ဒီမိုကရေစီ ခေါင်း ဆောင် တွေ ၊ အစိုးရအဖွဲ့ တွေအားလုံးကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်သင့်ပါ တယ်" ဟု ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသား ကိုကျော်စိုးက ပြောပါသည်။
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားသည် နိုဝင်ဘာ ၁၉ နံနက် နံနက် ၉ နာရီ မိနစ် ၃၀ တွင် ရန်ကုန် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိကာ ညနေ ၃း၄၀ နာရီ ဝန်းကျင်တွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ ပြန် လည် ထွက်ခွာသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted: 19 Nov 2012 08:50 PM PST
As an x wife, that does not mean I have to be against every single argument that my x husband has written to highlight the terrible corrupted abuse by some of our mighty leaders, x premiers and current heads of our national conglomerates.
I'm not ashamed to admit he's damn right.
In my personal opinion, we Umno members will be the ultimate losers..not our leaders, not their families..nor their buddies.
I know it sounds despicable.
'They' have amassed so much 'whatever' for their clan and cucu cicits...little or hardly for our sakes.
It's up to us Umno members to keep on fighting for what is right..we are in an absolute quandary.
We cannot keep on washing their selekeh, smelly buttocks!
There are many intelligent pro BN bloggers who can advise our leaders in their own effective style.
Scold them, shake them up, pour water over their head, just do it!
We do fight our opponents but those we're defending must come clean.
Give themagood, brutal whack..wallop them!
Whether we are paid handsomely to blog or otherwise is immaterial.
We don't want to lose..we mustn't!
We want BN to win withasatisfying majority in the PRU 13.
Yet we don't want to win and still be saddled with the obviously torturous economic turmoil created/bungled by our VVIP leaders who think they can do whatever they like while holding power.
Sadly, there are those whom we had idolized and hold in high esteem still hoodwinking us loyal Umno members and carrying on with their innocent looking faces..macam takde guilt langsung!!
The worst part is that 'they' are still carrying on with their dishonesty and thinking we're blind fools.
As an inconsequential, indispensable, just an insignificant sole Umno member vote, I hope we will take note of this pro pembangkang posting inavery serious and liberal-minded manner..55 years after..http://sakmongkol.blogspot.com/
To our topmost row of Umno leadership, do your job sincerely for the people of Malaysia or buzz off.
Let the more capable and trustworthy Umno members take the helm before it's too late.
We are willing to humban you guys out but NOT allow the one and only party Umno which we belong to jadi punah!
Posted: 19 Nov 2012 10:21 PM PST
Mursyidul Am Pas, Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat berkata, laporan muka depan sebuah akhbar berkenaan "Umno murtad" hari ini satu pembohongan dan fitnah terbaru ke atas beliau.
Terdahulu 'admin' FB Nik Aziz berkata: "Setelah layanan baik diberikan kepada media termasuk Utusan Malaysia sepanjang Muktamar Pas Kali ke-58, inilah hadiahnya. Fitnah yang sangat dahsyat terhadap Tuan Guru Al Mursyidul Am Pas". -SH
"FITNAH" - talian hayat terakhir UMNO untuk survive.
Cukup jelas di dlam laporan semalam dimana begini laporan dari harakahdaily:
Amat nyata di dalam ayat itu, TGNA tidak menuduh UMNO murtad TETAPI yang nyata UMNO perlekeh Islam dan yang perlekeh Isla, BOLEH JADI murtad. TGNA menghuraikannya berdasarkan kitab Mestika Hadith yang diterbitkan oleh Jabatan Perdana Menteri sendiri.
Mengapa tidak ditimbulkan kitab yang disebutkan oleh TGNA itu?
Apakah kerana sudan terpentong ke batang hidung maka isi kandungan kitab itu cuba diselindungkan?
Apakah kerana sudah tergigit cili dan merasa pedasnya maka dituduhnya TGNA telah berkata UMNO murtad?
Jelas, TGNA tidak menyatakan UMNO murtad, namun, yang nyata, hukum kebenaran dan keadilan dari Tuhan akan tetap terdedah nanti samada UMNO yang perlekehkan Islam itu murtad atau pun tidak.
"Doa harus bagi yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi tidak ada hijab (dinding) dengan ALLAH SWT," katanya kepada Sinar Harian, semalam.
"Cadangan saya untuk mengelakkan supaya didoakan keburukan, setiap pihak perlu diberikan peluang dan ruang demokrasi, kembalikan hak rakyat dan pihak terlibat," katanya. -SH
Posted: 19 Nov 2012 04:37 PM PST
by Khaled Abu Toameh November 15, 2012
Today there is almost no room for moderates among the Palestinians. Any Palestinian who dares to talk about compromise and peace with Israel, or even meet with Israelis, is immediately denounced asa"traitor" and "defeatist." Take, for example, the most recent case of Munib al-Masri,awealthy Palestinian businessman from Nablus, the largest city in the West Bank. Known as the "Palestinian Rothschild," al-Masri has drawn strong condemnations from many Palestinians for hosting Israeli businessman Rami Levy at his home.
Even Palestinian journalists have joined the campaign against al-Masri. Some 70 journalists signedapetition calling on the Palestinian media to stop calling calling al-Masri's palace by its name "The House of Palestine." Inspired by Andrea Palladio, the most influential individual in the history of Western architecture, The "House of Palestine" is the most expensive palace in the West Bank. It was in this palace that al-Masri met with Levy and Palestinian, Arab, Islamic, UN and EU representatives to find ways to "break the stalemate" in the Middle East peace process.
The main purpose of the gathering was to "create an Arab-Islamic-Jewish alliance to impact decision-makers by launching an initiative to break the stalemate," according toastatement issued by al-Masri. Palestinians representing various political groups have since condemned al-Masri for promoting "normalization" with Israel by inviting an Israeli businessman to the meeting in his palace. The widespread condemnations forced al-Masri to issuea"clarification" in which he reassured Palestinians that he was "totally opposed to any economic relations with Israeli businessmen as long as Israel continued to occupy the 1967 territories." The "clarification" is yet another sign of how moderate Palestinians succumb to threats and calls for boycott. A few days later, Palestinian Authority President Mahmoud Abbas underwent the same experience.
In an interview with Israel's Channel2TV station, Abbas stated that he did not want to return to his birthplace of Safed [in northern Israel], triggering an unprecedented wave of denunciations from many Palestinians who accused him of relinquishing the Palestinian refugees' "right of return" to their former villages inside Israel. Like al-Masri, Abbas later reassured Palestinians that he remained "committed to the right of return" and that he would never compromise on the rights of the refugees.
Obviously, the Palestinians have been radicalized toapoint where they are not ready to hear about any concessions to Israel or tolerate the presence of an Israeli businessman inaPalestinian city. This radicalization is the direct result of decades of anti-Israel incitement and indoctrination in the Palestinian territories --acampaign that has been spearheaded, ironically, by the "moderate" Palestinian Authority leadership that is publicly talking about making peace with Israel. Gatestone Institute
by Khaled Abu Toameh November 19, 2012
There is nothing more nauseating than watching people celebrate as rockets are being fired toward Israel from the Gaza Strip. This is what happened last week when Hamas fired rockets at Jerusalem and Tel Aviv. As soon as the sirens went off, many Palestinians took to the streets and rooftops, especially in Jerusalem's Arab neighborhoods, to cheer Hamas. Sometimes they responded to the Hamas rockets by launching fireworks into the air asasign of joy, and chanting, "We are all Hamas!" and, "O Jews, the army of Mohammed is coming after you!"
Scenes of jubilation over the rocket attacks on Israel were also reported in several Palestinian cities in the West Bank, including Ramallah, the center of Palestinian "pragmatism and moderation." Later, upon learning that Hamas's rockets had failed to kill Israelis in the two cities, the Palestinians voiced disappointment. Never mind that the rockets could have fallen on their heads. As far as these Palestinians are concerned, there is no problem ifanumber of Arabs are killed on the way to destroying Israel. The celebrations reflect the strong hostility that many Palestinians continue to feel toward Israel despite 20 years ofapeace process, and billions of dollars of Western aid. This hostility is the direct result of years of anti-Israel and anti-Western incitement in the Arab and Islamic world.
The hostility is directed not only toward Israel, but also its friends -- above all, the United States. Similar outbursts of joy had erupted in many parts of the West Bank, Gaza Strip and east Jerusalem immediately after Palestinians heard of the 9/11 terror attacks in the US. And this was not the first time that Palestinians had expressed joy over the targeting of Israeli cities. During the 2006 war in Lebanon, Palestinians and some Arab citizens of Israel took to rooftops to cheer Hizbullah's rocket attacks on northern cities in Israel. During the second intifada, many Palestinians, particularly in the Gaza Strip, used to take to the streets to sing and dance and hand out candies after hearing about another suicide bombing inside Israel.
And when Saddam Hussein fired rockets at Israel in the early 1990's, Palestinians also took to the streets and rooftops, chanting, "O beloved Saddam, strike strike at Tel Aviv!" Last week, by the way, many Palestinians in Ramallah, Nablus and Hebron were chanting: "O beloved Qassam [Hamas's armed wing], destroy, destroy Tel Aviv!" and "The people want the destruction of Israel!" No one is expecting the Palestinians to express solidarity or sympathy with Israel in its confrontation with Hamas.
But when many Palestinians express their joy in public over the firing of rockets and missiles at Israeli cities, one is entitled to wonder whether there isamajority of Palestinians who would ever agree to any form of compromise with Israel. In today's world of the Palestinians, anyone who talks about peace with Israel isatraitor andacollaborator; but anyone who calls for the destruction of Israel and fires rockets at Tel Aviv and Jerusalem isahero. Gatestone Institute